Satechi M1, jiirka ipadkaaga iyo qaabkaaga Apple Apple | Wararka IPhone
Satechi wuxuu wali aamin ku yahay fikradeeda ah in alaab lagu bixiyo qaab fudud laakiin tayo leh, oo aluminium u ah halyeeyga, qaabka ugu fiican "qaabka Apple" iyo waliba qiimo aad u xiiso badan. Waxay mar kale ku sameysaa jiirkeeda cusub ee Satechi M1, oo ah qalab ku habboon Mac-da, iyo tan macruufka 13 ee iPad-ka.
Naqshad wanaagsan, qalabka heerka koowaad, dhammeystir wanaagsan, isku xirnaanta Bluetooth, cabir aad u yar laakiin raaxo leh in la maareeyo, iyo batteri dib loo buuxin karo oo loo maro USB-C. Kani waa soo koobida jiirkan cusub ee ka imanaya Satechi ee aan hoos ku tusi doono si faahfaahsan.
Jirka oo dhan wuxuu ka kooban yahay aluminium dusha sare, oo leh dhammeystir anodized ah oo leh midabbo kala duwan (cawl qalin ah, cirro bannaan, dahab iyo casaan) oo si fiican ugu habboon midabada aaladaha Apple. Qaybta kore kaliya labada badhan ayaa jabiya jidhkan aluminium, oo leh waxyaabo caag ah oo madow ah (marka laga hadlayo cirro iyo dahab). Giraangiraha wareega sidoo kale waa macdan leh dusha ilkaha si uu ugu dhaqaaqo dhib la'aan. Laydh yar oo badhtamaha badhannada ka tusaya ayaa muujinaya batteriga hooseeya ama qalabka uu ka qaadanayo.
Waxay leedahay miisaan 177 garaam, taas oo ka dhigaysa wax fudud. Si kastaba ha noqotee, mahadsanid aluminium, dareenka markaad soo qaadatid maahan inaad haysato toy gacantaada ku jira, waa shey aad u adag oo sida muuqata iska caabin doonta isticmaalka degdegga ah si aad u wanaagsan. Baaxaddiisa iyo qaab yar oo qalooca ayaa ka dhigaysa mid raaxo leh in la isticmaalo, aad uga raaxo badan Muuqaalka Sixirka, aadna ugu fidsan qof walba. Waxay isticmaashaa isku xirnaanta Bluetooth 4.0, sidaa darteed uma baahnid nooc kasta oo isku xira USB kumbuyuutarkaaga ama iPad-kaaga, waxay la shaqeyn doontaa mid ka mid ah sanduuqa oo leh dhowr talaabooyin dejin aad u fudud. Marka laga hadlayo iPad-ka, qaabeynta ayaa xoogaa ka adag, laakiin waxaa lagu sharaxay fiidiyowga.
Si aad ugu adeegsato aalado dhowr ah waxay leedahay cillad yar, taasna waa inay ka maqan tahay xusuus, markaa waa inaad mar labaad isku xirtaa mar kasta oo aad qalabka bedesho. Waxaad ku lumineysaa dhowr ilbiriqsi oo ku saabsan habka dejinta, markaa ma xuma sidaas midkoodna. Kuma shaqeynayo baytariyada, laakiin waxay la shaqeyneysaa batteri dib loo soo celin karo iyada oo loo marayo USB-C-ga ku dheggan xagga hore. Haa, waa suurtagal in la isticmaalo jiirka inta ay dib uga soo ceshanayso fiilada ku xiran, taas oo dhanka kale ay noqon karto isku fiilo aad u isticmaashay inaad dib ugu buuxiso MacBook-gaaga ama iPad Pro, wax aan la malayn karin waqti aan fogayn.
Waxqabadka jiirkan Satechi M1 waa sidii la filayay. Duubku waa mid siman oo aad u fudud in si sax ah loo maareeyo iyadoo ay ugu wacan tahay naqshadeynta giraangirta iyo habsami u socodka wareeggiisa. Badhamada waa weyn yihiin, raaxo leh in la isticmaalo iyo adag ku filan si looga fogaado qasab aan la filayn. Tilmaamuhu si habsami leh ayuu ugu dul wareegayaa shaashadda, isagoon qadarin wax dib u dhac ama boodbood ah. Satechi ma muujinayo ismaamulkeeda, kaliya waxaan ognahay in marka uu LED-ka qariya inta udhaxeysa badhamada uu hooseeyo, uu casaan shidi doono, isagoo noo digaayo Waxaan la joogay dhowr toddobaad ka dib markii dib loo buuxiyey bilowgii weli wali ma helin batteriga hoose.
Iyada oo la adeegsanayo naqshad fudud oo qurux badan, jirka aluminium ah oo siisa dareen weyn, iyo in ka badan qalliin sax ah, ma aanan helin sabab aan ugu talinno jiirkan Satechi M1 qof kasta oo raadinaya wax fudud, waara oo lagu kalsoonaan karo in lagu isticmaalo. Pro iyo iOS 13, ama Mac-gaaga, Windows-ka, iwm. USB-C iyo isku xirnaanta Bluetooth waxay kaa dhigayaan inaad iska ilowdo fiilooyinka ama adapters-ka dheeriga ah, maadaama aad ka qaadi karto fiilada MacBook-gaaga ama iPad Pro, oo haddii batterigu kaa dhammaado waxaad u isticmaali kartaa fiilada ku xiran inta aad dib u buuxinayso. Waxaa lagu heli karaa afar midab oo sifiican ugu dhigma laptops-kaaga Apple ama iPad, waxaa lagu qiimeeyaa € 34,99 on Amazon (isku xirka).
Hawlgal wanaagsan, oo aan lahayn dib u dhac iyo taabasho wanaagsan oo badhannada
Bateriga dib loo buuxin karo iyadoo la adeegsanayo USB-C (fiilada ayaa lagu daray)
Xusuusin uma laha aalado badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Satechi M1, jiirka iPad-kaaga iyo Mac-kaaga qaabka Apple
Apple wuxuu bilaabayaa Beta 5 ee iOS 13, iPadOS iyo tvOS 13